ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေးထိ မေးခွန်းများနှင့်အဆိုများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုဘိုဦး တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ တိဘက်ပြည်သူ့ကွန်ဂရက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဒုတိယပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mr. Cheng Siqu ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ တိဘက်ပြည်သူ့ကွန်ဂရက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဒုတိယပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mr. Cheng Siqu ဦးဆောင်သော ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး အငယ်တန်းစာရေးရာထူး ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Ms. Tone Tinnes အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် ပြင်သစ်နိုင်ငံစီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာကောင်စီ၏ ဥရောပနှင့်နိုင်ငံတကာရေးရာ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း Mr. Jean-Marie Cambaceres အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်မိုးနိုင် Supreme Trading Company Limited အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသိန်းဇော် GE International Inc. အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး (၁၆) ရက်မြောက်နေ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြားသည့် နိဂုံးချုပ်အမှာစကား
ပွညျသူ့လှတျတျော၊တောငျသူလယျသမားနှငျ့ အလုပျသမားရေးရာကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးကြျောမွငျ့ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ တိုကျကွီးမွို့နယျ၊ ဆငျနငျးရိုးကြေးရှာမှ ဦးတငျမွငျ့ ဦးဆောငျသော တောငျသူလယျသမားမြားအဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့
(ဃ)-အထက်တန်းရှေ့နေများအား တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ် ရာတွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်စနစ်ကိုကျင့်သုံးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(စ)-လစာခံစားခွင့်မရှိသေးသော ဝန်ထမ်းသစ်ဆရာဝန်များအားလုံးကို ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် တက်စေ ခြင်းအစား အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး တာဝန်ယူမည့် သူများကိုသာ တက်ရောက်စေရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဈ) သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်များအား ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲရာတွင်လည်းကောင်း၊ ဖော်ပြရေးသားရာတွင် လည်းကောင်း သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန် စကားရပ်အစား သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာဆရာဝန် စကားရပ်ကိုအစားထိုးသုံးစွဲပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်‌မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄) ရက်မြောက်နေ့ (၃. ၆. ၂၀၁၉) 03/06/19
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅) ရက်မြောက်နေ့ (၅. ၆. ၂၀၁၉) 05/06/19
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၆) ရက်မြောက်နေ့ (၆. ၆. ၂၀၁၉) 06/06/19
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၆) ရက်မြောက်နေ့ (၆-၆-၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅) ရက်မြောက်နေ့ (၅-၆-၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄) ရက်မြောက်နေ့ (၃-၆-၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃) ရက်မြောက်နေ့ (၃၀-၅-၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၂) ရက်မြောက်နေ့ (၂၈. ၅. ၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၁) ရက်မြောက်နေ့ (၂၇. ၅. ၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ (၂၄. ၅. ၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး န၀မနေ့ (၂၂. ၅. ၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ (၂၁. ၅. ၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ (၁၇. ၅. ၂၀၁၉)